MacKenzie Scott, oo uu qabi jiray ninka ugu tajirsan addunka oo guursatay macallin saynis ka dhiga iskuulka ay carruurteeda dhigtaan. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii MacKenzie Scott, oo uu qabi jiray ninka ugu tajirsan addunka oo guursatay...
Wararka la xiriira guurkeeda iyo Dan Jewett ayaa lagu shaaciyay website-ka hay’adda samafalka ee Giving Pledge.
“Dan waa nin aad u wanaagsan, waana ku faraxsanahay guurkooda,” ayuu Mr Bezos ku yiri hadal uu soo saaray.
Boggeeda qoraaga Amazon ayey ku sheegtay inay “ku nooshahay Seattle iyada iyo afarteeda carruur ah iyo seygeeda Dan.” Wuxuu wax ka dhigaa iskuulka ay dhigtaan caruurteeda.
Website-ka The Giving Pledge waxaa loo sameeyay dadka bilyaneerada ah ee ballanqaada inay hantidooda qaar ka mid ah ugu deeqayaan hay’adaha samafalka.
Previous articleWakiilada Caalamka oo wada kulamadii ay iskaga hor keeni lahaayeen dhinacyada isku haya xalka gaarida Doorashada
Next articleTaliyaha Ciidanka Xoogga Jeneraal Odawaa oo sheegay in ay Howlgalo ka sameeyeen degaanka Baloow ee gobolka shabeellada Hoose..
. Wasaaradda Caafimaadka dowlad Goboleedka Puntland ayaa faah faahin ka bixisay xaaladihii ugu danbeeyay ee xanuunka Covid 19 ee Isbuucii la soo dhaafay kadib...